စနေနေ့ညနေ မယ်ဆိုင်တစ်ခေါက် - ရတနာသိုက်
မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်၊ တာချီလိတ်မြို့ကနေ စနေနေ့ ညနေခင်းပိုင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်၊ မယ်ဆိုင်မြို့သို့ ပစ္စည်းသွားယူရင်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လမ်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။ မြန်မာက ညာသွား၊ ထိုင်းက ဘယ်သွားပေါ့။ ညနေခင်းရဲ့ မယ်ဆိုင်းအလှတရားနဲ့ ထူးဆန်းမှုတစ်ခုတွေခဲ့မိပါတယ်။ အဲတာကတော့ နယ်စပ်ဂိတ်ထိ မြန်မာဘက်ဝင်မည့်အခြမ်း လမ်းတစ်ဖက်ပိတ်ပြီး ညနေပိုင်း ဈေးခင်းခြင်းပါပဲ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာက အသွားလမ်းအပြန်လမ်းဆိုပြီးရှိတော့ အပြန်လမ်းရဲ့ နယ်စပ်ဂိတ်ကနေ အတွင်း နှစ်ပြလောက်အထိ ဈေးဖွင့်ခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းပါ။ လမ်းကိုပိတ်ပြီး ဘာလို့ ဈေးခင်းခိုင်းလည်း စဉ်းစားခန်းဝင်ခဲ့မိပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါ။ စနေနေ့ တစ်ရက်ပဲလို့သိရပါတယ်။
အပြန်လမ်းပိတ်ပြီး ဈေးခင်းထားခြင်း မယ်ဆိုင်
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူစည်းကားတာတော့အမှန်ပဲ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဆွဲဆောင်နေသလို မြန်မာဘက်အခြမ်းက ဝယ်ယူသူတွေကိုလည်း ဆွဲဆောင်စေပါတယ်။ ဒေသတစ်ခု ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ နယ်မြေခံ အာဏာပိုင်တွေ ဖန်တီးပေးတာ သူတို့ဒေသအတွက်အတော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ရပ်လေးတွေပါ။ လူစည်းကားခြင်းက ဒေသအတွင်း ဈေးသည်/ဈေးဝယ်တွေအတွက် စီးပွားရေး ပိုမိုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်စေပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးလေး မြင်ရတော့ တစ်ချိန်က အရမ်းစည်းကားခဲ့တဲ့ မြန်မာဘက်ခြမ်း တာလော့ဈေးကြီးကိုပြန်လည်း မြင်ယောင်မိခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ တာလော့ဈေးကြီး မစည်းကားနိုင်တော့ပါဘူး။ တာလော့ဈေးက ဈေးသည်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်လဲ? ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်လဲ? ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ အမှန်ပြောရရင် တစ်ချိန်က မြန်မာဘက်ခြမ်းအရမ်းစည်းကားတဲ့ တာလော့ဈေးသည်တွေဟာ ထိုင်းဘက်ခြမ်းမှာ ရောက်ရှိသွားခြင်းပါ။ ဘာလို့ ထိုင်းဘက်ခြမ်းရောက်သွားသလဲပေါ့? ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။
တစ်ချိန်က တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ မြန်မာဘက်ကမ်းမှာ သိုလောင်ပြီး အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကို ပို့ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ တာလော့ဈေးကြီးမှာ ပြသရောင်းချတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ မြန်မာဘက်ခြမ်းမှာ သိုလှောင်ခွင့်မပေးတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အခတ်အခဲဖြစ်ရတဲ့အချိန်မှာ ထိုင်းဘက်ကမ်းက ခွင့်ပြုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စည်းထားဖို့ ဂိုထောင်တွေနေပေး ခင်းကျင်းဖို့ ဈေးနေရာပေးနဲ့ (၅)နှစ်အတွင်း နိုင်ငံဘက်အခြမ်းအတော်လေး လူစည်းကားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။
တရုတ်ဈေးကြီး မြန်မာဘက်ကနေ ထိုင်းဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောရတော့မှာပေါ့။ ဒေသတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ ဒေသရဲ့ ပေါ်လစီတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ပေါ်လစီတွေကောင်းမွန်တာနဲ့ ဒေသပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာပါ။ အရင်က တရုတ်သင်္ဘောတွေ မြန်မာဘက်ကမ်းဆိုက်ကပ်ပေမဲ့ ခုမကပ်တော့ဘူးလေ။ ထိုင်းကိုတိုက်ရိုက်ကပ်ပြီး ထိုင်းကိုပဲ အထူးပြုလာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ တာချီလိတ်မြို့ကြီး စီးပွားရေး အဘက်ဘက်ကကျဆင်းနေချိန် ပေါ်လစီတွေက ဒေသခံတွေကောင်းကြိုးအားနည်းနေတော့ တာချီလိတ်မြို့ကြီး လူစည်းကားမှု မရှိတာကြာပါပြီ။ ဈေးသည်တွေလည်း ရောင်းမကောင်း၊ အလုပ်သမားတွေလည်း အလုပ်မမှန် သူဌေးတွေလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်တွေကြောင့် လမ်းကြောင်းတွေ မပွင့် တယွတ်တိုက်သွားနေရသလိုဖြစ်ပေါ်နေပါတော့တယ်။
writer by: nayhlaingsoe
မွနျမာနိုငျငံနယျစပျ၊ တာခြီလိတျမွို့ကနေ စနနေေ့ ညနခေငျးပိုငျးမှာ ထိုငျးနိုငျငံနယျစပျ၊ မယျဆိုငျမွို့သို့ ပစ်စညျးသှားယူရငျးရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ လမျးတှဟော မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျပါ။
မွနျမာက ညာသှား၊ ထိုငျးက ဘယျသှားပေါ့။ ညနခေငျးရဲ့ မယျဆိုငျးအလှတရားနဲ့ ထူးဆနျးမှုတဈခုတှခေဲ့မိပါတယျ။ အဲတာကတော့ နယျစပျဂိတျထိ မွနျမာဘကျဝငျမညျ့အခွမျး လမျးတဈဖကျပိတျပွီး ညနပေိုငျး ဈေးခငျးခွငျးပါပဲ။ ထိုငျးနိုငျငံမှာက အသှားလမျးအပွနျလမျးဆိုပွီးရှိတော့ အပွနျလမျးရဲ့ နယျစပျဂိတျကနေ အတှငျး နှဈပွလောကျအထိ ဈေးဖှငျ့ခှငျ့ပေးလိုကျခွငျးပါ။ လမျးကိုပိတျပွီး ဘာလို့ ဈေးခငျးခိုငျးလညျး စဉျးစားခနျးဝငျခဲ့မိပါတယျ။ အမွဲတမျးတော့မဟုတျပါ။ စနနေေ့ တဈရကျပဲလို့သိရပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ လူစညျးကားတာတော့အမှနျပဲ နိုငျငံခွားသားတှကေို ဆှဲဆောငျနသေလို မွနျမာဘကျအခွမျးက ဝယျယူသူတှကေိုလညျး ဆှဲဆောငျစပေါတယျ။ ဒသေတဈခု ဖှဲ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့ နယျမွခေံ အာဏာပိုငျတှေ ဖနျတီးပေးတာ သူတို့ဒသေအတှကျအတျောလေးကောငျးမှနျတဲ့ လုပျရပျလေးတှပေါ။ လူစညျးကားခွငျးက ဒသေအတှငျး ဈေးသညျ/ဈေးဝယျတှအေတှကျ စီးပှားရေး ပိုမိုဖှဲ့ဖွိုးတိုးတကျစပေါတယျ။ ဒီလိုမြိုးလေး မွငျရတော့ တဈခြိနျက အရမျးစညျးကားခဲ့တဲ့ မွနျမာဘကျခွမျး တာလော့ဈေးကွီးကိုပွနျလညျး မွငျယောငျမိခဲ့ပါတယျ။ ခုတော့ တာလော့ဈေးကွီး မစညျးကားနိုငျတော့ပါဘူး။ တာလော့ဈေးက ဈေးသညျတှေ ဘယျရောကျကုနျလဲ? ရောငျးတဲ့ပစ်စညျးတှေ ဘယျရောကျကုနျလဲ? ဆိုတဲ့မေးခှနျးလေးတှထှေကျပျေါလာပါတော့တယျ။ အမှနျပွောရရငျ တဈခြိနျက မွနျမာဘကျခွမျးအရမျးစညျးကားတဲ့ တာလော့ဈေးသညျတှဟော ထိုငျးဘကျခွမျးမှာ ရောကျရှိသှားခွငျးပါ။ ဘာလို့ ထိုငျးဘကျခွမျးရောကျသှားသလဲပေါ့? ဒသေဆိုငျရာ အာဏာပိုငျတှနေဲ့ သကျဆိုငျနပေါတယျ။ တဈခြိနျက တရုတျကုနျပစ်စညျးတှဟော မွနျမာဘကျကမျးမှာ သိုလောငျပွီး အနယျနယျအရပျရပျကို ပို့ဆောငျခဲ့ကွတယျ။ တာလော့ဈေးကွီးမှာ ပွသရောငျးခတြယျ။ နောကျပိုငျးတော့ မွနျမာဘကျခွမျးမှာ သိုလှောငျခှငျ့မပေးတော့ လုပျငနျးရှငျတှေ အခတျအခဲဖွဈရတဲ့အခြိနျမှာ ထိုငျးဘကျကမျးက ခှငျ့ပွုလကျခံခဲ့ပါတယျ။ ပစ်စညျးထားဖို့ ဂိုထောငျတှနေပေေး ခငျးကငျြးဖို့ ဈေးနရောပေးနဲ့ (၅)နှဈအတှငျး နိုငျငံဘကျအခွမျးအတျောလေး လူစညျးကားသှားတာတှရေ့ပါတယျ။ တရုတျဈေးကွီး မွနျမာဘကျကနေ ထိုငျးဘကျကိုပွောငျးသှားတယျလို့ပွောရတော့မှာပေါ့။ ဒသေတဈခု ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့ဆိုတာ ဒသေရဲ့ ပျေါလစီတှနေဲ့သကျဆိုငျနပေါတယျ။ ပျေါလစီတှကေောငျးမှနျတာနဲ့ ဒသေပိုမိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာမှာပါ။ အရငျက တရုတျသင်ျဘောတှေ မွနျမာဘကျကမျးဆိုကျကပျပမေဲ့ ခုမကပျတော့ဘူးလေ။ ထိုငျးကိုတိုကျရိုကျကပျပွီး ထိုငျးကိုပဲ အထူးပွုလာပါတော့တယျ။ ကြှနျတျောတို့ တာခြီလိတျမွို့ကွီး စီးပှားရေး အဘကျဘကျကကဆြငျးနခြေိနျ ပျေါလစီတှကေ ဒသေခံတှကေောငျးကွိုးအားနညျးနတေော့ တာခြီလိတျမွို့ကွီး လူစညျးကားမှု မရှိတာကွာပါပွီ။ ဈေးသညျတှလေညျး ရောငျးမကောငျး၊ အလုပျသမားတှလေညျး အလုပျမမှနျ သူဌေးတှလေညျး ဘာလုပျရမှနျးမသိဖွဈနတေဲ့ အဖွဈတှကွေောငျ့ လမျးကွောငျးတှေ မပှငျ့ တယှတျတိုကျသှားနရေသလိုဖွဈပျေါနပေါတော့တယျ။